Iji vidiyo iji bulie ecommerce gị | ECommerce ozi ọma
Jiri vidiyo iji bulie ecommerce gị
Video bụ usoro ọ na - ewepụta nwekwuo ntụkwasị obi n'etiti ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ na enwere gburugburu 40% ntụgharị ndị ọzọ na-ekele ha dịka akụkọ si kwuo. Dabere na mpaghara ị na-arụ ọrụ na ya, ọ ga-adị mfe ma dị mfe karị ịmepụta obere vidiyo vidiyo nke ngwaahịa a. Ọ bụrụ, maka ihe kpatara ya, ịnweghị ike ịgụnye vidiyo nke ngwaahịa ọ bụla, anyị na-akwado ka ị tinye vidiyo na-adịghị mma na weebụsaịtị gị, iji wusie ike akara ngosi gị na ntụkwasị obi nke ndị ahịa.
Na ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị asọmpi na azụmahịa e-commerce, ịbanye na vidiyo ugbu a nwere ike ọ gaghị abụ echiche ọjọọ. Dabere na nyocha Brightcove, 46% nke ndị na-azụ ahịa gosipụtara na ha zụrụ ihe site na ikiri vidiyo.
Na-achọ echiche iji vidiyo iji bulie azụmahịa ecommerce gị? N'isiokwu a, aga m ekekọrịta ụzọ okike 11 maka ụlọ ọrụ eCommerce iji zipụ ngwaahịa ha na vidiyo. Ka anyi bido.
1 Mechie ngwaahịa
2 Gosi otu esi eji ngwa ahia a
3 Vidio Ntụrụndụ
4 Ozi Onye Isi
5 Mmekọrịta video mgbasa ozi
6 Nkwado Influenza
7 Gụnye ọgbụgba vidiyo na weebụsaịtị gị
8 Tinye vidiyo na ozi ịntanetị
9 Vidio vidiyo maka ahia
Otu n'ime ụzọ kachasị mfe iji mụbaa ahịa bụ iji vidiyo maka ngosipụta ngwaahịa ma ọ bụ igosi ngwaahịa nke ọma. Vidio na-egosi ngwaahịa sitere n'ọtụtụ akụkụ na imechi emechi nwere ike inye ndị mmadụ nghọta dị mma banyere ihe ha na-azụ, nke nwere ike ime ka mgbanwe ahịa gbanwee.
Dabere na nyocha nke Wyzowl, 80% nke ndị mmadụ kwuru na vidiyo vidiyo na-enye ha obi ike karị mgbe ịzụrụ ngwaahịa na ntanetị. Vidio ahụ na-enye ndị ahịa nghọta ka mma banyere ihe mgbanaka ahụ dị, na-egosi ya site n'akụkụ dị iche iche ma na-enye echiche dị nso. Ihe ndị ahụ na-agbakwunye na-achọpụta ihe mara mma nke ihe ahụ ma eleghị anya na-abawanye ohere na mmadụ ga-azụta ya.
Gosi otu esi eji ngwa ahia a
Ngwaahịa ụfọdụ na-emepụta ihe ọhụụ ma na-egosi ndị mmadụ etu esi eji ha nwere ike inyere ndị mmadụ aka ịghọta uru ngwaahịa a bara.
Ihe onyonyo a bidoro site n’igosi etu ihe ahụ dị na ngwugwu ya na ihe a gụnyere. O gosiziri onye na-ekiri ya ngwa ngwa na ọ dị mfe ịchịkọta ya, otu esi esi nri n’ime ya, yana etu esi apịa ya ma ị mechaa. Vidio ahụ na-egosikwa na ngwaahịa dị mfe ihicha na obere.
Atụmatụ ndị a ga-esiri ike igosipụta site na iji naanị onyonyo na ederede ederede. Mana obere vidiyo nwere ike inye ndị ahịa ohere ịghọta ngwa ngwa na nke ọma ihe ngwaahịa a na-arụ yana otu esi eji ya.
Kọọ akụkọ na-akpali mmetụta uche
Storykọ akụkọ ọma na ikiri fim nwere ike ịkpali ndị mmadụ, ndị mmadụ na-akọrọkarị ndị ọzọ ihe dị ha n’obi. Ọ nwekwara ike ịbụ nnukwu ụzọ iji mepụta onyonyo ike dị ike.
N'ezie, nyocha Google kpughere na ụmụ nwanyị dị afọ 18 ruo 34 nwere ike ịdị okpukpu abụọ karịa ka ha chee echiche nke ọma banyere akara ngosi gosipụtara mgbasa ozi siri ike. Ha nwekwara ike 80% nwere ike ịmasị, ikwu okwu na, ma kesaa ụdịrị mgbasa ozi ahụ mgbe ịlechara ha.
Pantene malitere mgbasa ozi mgbasa ozi a na-akpọ Chrysalis nke gosipụtara nwa agbọghọ ntị chiri nke rọrọ nrọ ịkpọ violin. Mgbe otu n’ime ndị ọgbọ ya chọwara ya okwu ọchị ma kwaa ya emo, ọ fọrọ nke nta ka ike gwụ ya n’ nrọ ahụ. Ma emesia o metara onye nwere aka nke aka ya busu, onye chiri ya na ya ma gbaa ya ume ka o gwuo egwu. Nwata nwanyi n’enwe nsogbu n’uzo, ma o nogidere. Ghichaa ihe ndi ozo ma merie n'ikpeazu, na-eju onye obula anya, tinyere onye o kwere ka o kwenye.
Ndị mmadụ na-enwe obi ụtọ ka ha nwee obi ụtọ, yabụ iji ihe ntụrụndụ nwere ike ikwe ka ekesara vidio ecommerce na mgbe ụfọdụ ịrịa.
Otu n'ime ihe atụ ama ama banyere iji ihe ntolite etolite akara bụ usoro vidiyo "Will It Blendtec". Na 2005, Blendtec nwere nnukwu ngwaahịa mana mmata na-esighi ike. Blendtec CEO na ndị otu nyocha nwalere igwekota ha site na ịgwakọta mbadamba osisi iji nwalee ngwa ngwa nke ngwaahịa ha. George Wright, onye isi ọchụnta ego nke Blendtec, wepụtara echiche iji vidio ọrụ ahụ ma debe vidiyo na ịntanetị.
Site na itinye ego naanị $ 100, Blendtec tinyere vidiyo nke ngwakọta ngwakọta ya dị ka ogige rake, marble, na ọkụkọ rotisserie na YouTube. Vidio ndị ahụ mepụtara ihe karịrị nde isii n’ime naanị ụbọchị ise. Mgbasa Blendtec bụ ụzọ dị iche iche iji gosipụta ike nke ngwaahịa ha mgbe ha na-anabata onye ọ bụla lere vidiyo ha.
Blendtec gara n'ihu na-emepụta vidiyo ndị a na 2006 ahịa ha mụbara site na 700%, na-eweta ego ụlọ ọrụ na-akpata ihe ruru $ 40 nde maka afọ ahụ.
Mepụta vidiyo na-atọ ụtọ na-ewe ụfọdụ okike, mana ọ nwere ike ịbụ ụzọ dị mma iji bulie akara ngosi gị ma mechaa nwekwuo ahịa.
Ozi Onye Isi
Inwe onye isi ma ọ bụ onye isi ọrụ mepụtara vidiyo nwere ike ịbụ nnukwu ụzọ iji hazie akara ma zụlite njikọ miri emi na obodo. Vidiyo na-egosipụta ndị isi ọrụ nwere ike iwulite ntụkwasị obi na mmekọrịta n'etiti ndị na-ege ntị ka ha mata ndị nọ n'azụ ụlọ ọrụ ahụ.
N'ezie, nyocha nke Ace Metrix gosipụtara na mgbasa ozi na-egosi onye isi ụlọ ọrụ na-eme nke ọma karịa ndị na-adịghị na nkezi.
Vidio ahụ bụ ụzọ dị mma iji webata ngwaahịa ahụ ma mee ka ndị mmadụ zute onye isi ọrụ. E gosipụtara ya dịka ezigbo nkwukọrịta Raspberry Pi karịa azụmaahịa.
Ben Brode rụrụ ọrụ maka Blizzard Entertainment ma bụrụ onye ndu ndu maka Hearthstone, otu n'ime egwuregwu kaadị egwuregwu kachasị ewu ewu. Na mgbakwunye na ịrụ ọrụ na nhazi nke egwuregwu ahụ, ọ rụkwara oke ọrụ na ire egwuregwu ahụ site na igosi na vidiyo maka mgbasawanye ọhụụ ọhụrụ.
Buru n'uche na ọ bụghị mgbasa ozi niile na onye isi na ya mere nke ọma. Fọdụ n'ime igodo iji mee ihe ngosi nke CEO ga-aga nke ọma gụnyere:
Ndị mmadụ ga-eche na onye isi ọrụ ahụ bụ eziokwu ma bụrụ eziokwu.
Onye isi ulo oru a aghaghi itinye aka na atumatu a. Mgbanwe mgbasa ozi na-agbanwe agbanwe ga-arụ ọrụ karịa otu mgbasa ozi.
Onye isi oche ga-abụrịrị ezigbo onye nkwukọrịta ma na-adọrọ adọrọ. Ọ bụghị ndị isi niile ga-enwe ikike dị mma iji tinye ndị na-ege ntị site na vidiyo.
Mmekọrịta video mgbasa ozi
Dika ahia vidiyo na-adi mpi, ime vidiyo vidiyo nwere ike buru ezigbo uzo iguzo. Dabere na otu ọmụmụ nke otu mgbasa ozi Magma, mgbasa ozi vidiyo mmekọrịta na-eduga na mmụba 47% na ntinye aka na mgbasa ozi na-abụghị mmekọrịta yana iburu n'uche ịzụta site na oge 9.
Mkparịta ụka vidiyo na-emekọrịta mmekọrịta dị ọhụụ ọhụụ, yabụ ị nwere ike ịhụbeghị ọtụtụ gburugburu ebe a. Mana ka ọtụtụ ụlọ ọrụ na-achọpụta ịdị irè ha, ha nwere ike ga-aga n'ihu na-eto eto na ewu ewu.
Lee ụfọdụ ihe atụ nke mgbasa ozi vidiyo mmekọrịta ...
Twitch bụ ikpo okwu na-ewu ewu maka ndị na-egwu egwuregwu na-achọ ịkwanye egwuregwu vidio a ma ama, otu n'ime ụzọ ha si enweta ego bụ ikwe ka ndị na-ekiri ha zụta "obere" ka ha wee nwee obi ụtọ na otu egwuregwu Esports kachasị amasị ha. Agbanyeghị, ha na-enye ndị na-ekiri ohere irite "bits" n'efu site na ikiri mgbasa ozi vidiyo mmekọrịta.
Ndị ọchụnta ego nwere ike isoro ndị na-eme ihe ike na-emekọrịta ihe site na vidiyo iji lelee ndị ọkachamara pụrụ iche. Ebe ọ bụ na ndị na-eme ihe ike emeela ntụkwasị obi na ntụkwasị obi na ndị na-eso ụzọ ha, iso ndị na-eme ihe ike na-arụ ọrụ nwere ike ịbụ ụzọ dị ngwa ma dịkwa irè iji ruo ndị ahịa.
Tinye vidiyo na ibe ngwaahịa
Mgbe ị na-ewu peeji nke ngwaahịa nke weebụsaịtị e-commerce gị, biko tinye nkọwa vidiyo nke ngwaahịa dị iche iche. Dabere na nyocha nke Animoto, ihe eji eme ihe banyere igwe ojii, ndi n'azu ahia na ntanetị nwere ike ihu ntaneti vidiyo nke ngwa ahia karia igu ihe ederede.
Enwere ike itinye nkọwa ederede na ibe ngwaahịa, mana nkọwa vidiyo ga-agbakwunye. Ọ bụrụ na onye na-azụ ahịa achọghị ịgụ nkọwa ederede, ha nwere ike ịhọrọ ile vidio ahụ. Site na ịgbakwunye nkọwa vidiyo na ibe ngwaahịa gị, ị ga-enweta ọnụego ntụgharị dị elu maka ngwaahịa gị.
Kekọrịta vidiyo nkọwa ngwaahịa na YouTube. Mepụta vidiyo nkọwa ngwaahịa na ịkekọrịta ha na YouTube bụ ụzọ dị irè iji bulie ahịa ecommerce weebụsaịtị gị.
Vidiyo nkọwa ngwaahịa bụ mpaghara nke vidiyo vidiyo na-ere ahịa nke, n'ezie, kọwaa otu ngwaahịa si arụ ọrụ. Ha nwere ike ịdị ndụ ma ọ bụ na-emegharị ahụ, mana ebumnuche ha bụ ịkụziri ndị na-ekiri ha ihe dị n'ime ngwaahịa.
Mgbe onye na-eri ahịa nụrụ banyere otu ngwaahịa na weebụsaịtị webụsaịtị e-commerce gị mana ọ kwenyesighi ike na itinye ego ahụ bara uru, ha nwere ike chọọ vidiyo vidiyo na-akọwa ya n'ịntanetị.
Agbanyeghị na enwere ike ịkekọrịta vidiyo nkọwa ngwaahịa n'ọtụtụ nyiwe, YouTube na-enyekarị nsonaazụ kacha mma. Mgbe ịkekọrịta vidiyo nkọwa ngwaahịa na YouTube, ha agaghị apụta naanị na YouTube, kamakwa na nsonaazụ ọchụchọ Google na Bing. Ndị ahịa nwere ike ịchọ vidiyo vidiyo na-akọwa ngwaahịa site na iji nke ọ bụla n'ime engines ọchụchọ atọ a.
Na, iji kọwaa ike nke YouTube, onye ọ bụla maara na Google bụ ụlọ ọrụ ọchụchọ kachasị ewu ewu, mana ihe a na-elegharakarị anya bụ na engine nke abụọ kachasị na ụwa site na olu ọchụchọ bụ YouTube.
Mara ntakịrị eziokwu a, ọ bụghị ihe ijuanya na Google zụtara YouTube tupu ọ baa uru; agbanyeghị, ọ ka na-eju m anya na enwere ọtụtụ ndị na-ere ahịa ecommerce savvy nke m batara na 2019 ndị na-anaghị eji eziokwu a eme ihe maka uru ndị ọzọ na ụlọ ahịa ha n'ịntanetị.
Gụnye ọgbụgba vidiyo na weebụsaịtị gị
I nwekwara ike iji nleba vidiyo iji kwalite ngwaahịa na weebụsaịtị e-commerce gị. Mgbe ndị na-azụ ahịa hụrụ ndị ahịa gara aga ka ha na-ekwu maka ahụmịhe ha dị mma na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị na vidiyo ịgba akaebe, ha ga-enwekwu obi ike na ha na-azụ ahịa gị na ịzụta ngwaahịa gị.
Ndị ahịa gara aga mepụtara akaebe, yabụ ha na-enye echiche ebughi oke ibu banyere weebụsaịtị e-commerce gị, nke pụtara na ndị na-azụ ahịa na-atụkwasị ha obi karịa mgbasa ozi ma ọ bụ ozi ahịa ndị ọzọ. Ihe nlere vidio di irè karia ederede n'ihi na ha gosiputara onye ahia gara aga na ekwu okwu banyere omuma ha.
Akaebe na-enyere aka ịgbanwe na saịtị gị n'ihi na ha dabara n'ụdị ihe omume mmụọ nke a maara dị ka nkwupụta mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ma, dị ka Robert Cialdini si kwuo, n'akwụkwọ ya bụ́ Influence, ịgba akaebe mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ ngwa agha nke mmetụta.
Mgbe inwetara ihe nlere vidiyo, tinye ha na weebụsaịtị ecommerce gi. Ọ bụrụ na nke a bụ ihe nlere vidiyo banyere ụlọ ahịa gị n'ịntanetị n'ozuzu ya, biko tinye ya na ibe obibi gị. Ọ bụrụ na ọ bụ nlele vidiyo banyere otu ngwaahịa, biko tinye ya na ibe ngwaahịa.
Bulite vidiyo nkwado ngwaahịa ozugbo na Facebook
Mgbe ịkekọrịta vidiyo nkwado na ibe Facebook nke weebụsaịtị e-commerce gị, gbaa mbọ bulite ha ozugbo na netwọkụ mmekọrịta mmekọrịta.
Facebook na-enye ndị ọrụ ohere ịkekọrịta vidiyo n'ụzọ abụọ: itinye ha ma ọ bụ bulite ha ozugbo.
Mgbe ị tinyere vidiyo na Facebook, ị na-ejikọ njikọta na URL na a kwadoro ya, dịka YouTube ma ọ bụ Vimeo.
Ndị ọrụ nwere ike ịlele vidiyo nkwado gị na Facebook n'agbanyeghị otu esi ekesara ha.
Agbanyeghị, n'ime ụzọ abụọ ahụ akwadoro, ị ga-adọta echiche ndị ọzọ site na ị bulite vidiyo nkwado gị ozugbo na Facebook.
Netwọk mgbasa ozi na-elekọta mmadụ nwere mmasị na ọdịnaya vidiyo dị na ọdịnaya vidiyo agbakwunyere, yabụ ibugo vidiyo na Facebook na-ebutekarị echiche.
Vidiyo ndị amaala ga-abawanye na akụkọ ndị na-eso ụzọ gị, nke pụtara na ọtụtụ ndị ọrụ ga-ele ma lelee ha.
Tinye vidiyo na ozi ịntanetị
Mgbe ị na-eji email iji kpọtụrụ ndị na-ege ntị na ebe nrụọrụ weebụ e-commerce gị, tụlee gụnyere vidiyo dị mkpa na ozi ịntanetị gị.
Nnyocha na-egosi na ozi ịntanetị nwere okwu "vidiyo" agbakwunyere n'ahịrị isiokwu ahụ nwere ike ịmepe pasent 19 karịa ozi ịntanetị ndị ọzọ.
Imirikiti ndị mmadụ na-ahọrọ ikiri vidiyo iji gụọ ederede ahụ, yabụ ịgbakwunye otu mkpụrụ okwu a na isiokwu nke ozi ịntanetị gị nwere ike ime ka ọnụego gị mepee. N'ezie, ị kwesịrị iji naanị "vidiyo" na isiokwu nke email ma ọ bụrụ na email ahụ nwere vidiyo n'ezie.
Tinye ego na mgbasa ozi vidiyo akwụ ụgwọ
Wezụga mmepụta na ndezi mmefu, ị gaghị akwụ nnukwu ego iji kwalite e-commerce gị site na iji vidiyo. Ahịa vidiyo bụ ụzọ dị ọnụ ala ma nwalee oge iji kwalite ụlọ ahịa gị n'ịntanetị. Ihe ị kwesịrị ịmalite bụ ekwentị gị dị na akpa gị na njikọ internetntanetị. Site na nke ahụ, ị ​​nwere ike ịbawanye ike ire nke vidiyo site na ịzụta mgbasa ozi vidiyo akwụ ụgwọ.
Iji bido na mgbasa ozi vidiyo akwụ ụgwọ, mepụta akaụntụ Google Ads ma melite mkpọsa vidiyo ọhụụ. Vidio mkpọsa nwere mgbasa ozi vidiyo, nke ị mepụtara ma bulite na Mgbasa ozi Google, nke na-egwu egwu na YouTube yana weebụsaịtị ndị ọzọ na Google Display Network. Agbanyeghị na ọnụahịa dị iche, ị nwere ike ịtụ anya ịkwụ ụgwọ 10-20 cents kwa ele.
Ọ bụrụ n ’ihere ka ibido na mgbasa ozi vidiyo, inwere ike ịchọ YouTube ma ọ bụ ebe ọzọ maka nkuzi; Mana, mgbe ịchọrọ enyemaka ọkachamara wee bilie ọsọ ọsọ, ụzọ kachasị mma m chọpụtara bụ nke AdSkills mepụtara, a na-akpọ ya BulletProof Youtube Ads.
Vidio vidiyo maka ahia
Gaghị atụ anya na ndị na-azụ ahịa ịchọta ebe nrụọrụ weebụ gị ecommerce belụsọ ma ị bulitere ya. Marketingzụ ahịa vidiyo bụ atụmatụ nkwado akwadoro nke nwere ike ịdọta ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị mgbe ị na-enyere gị aka iru ogo ntụgharị dị elu na usoro ahụ.
Naanị cheta iji mepụta vidiyo dị elu site na ebumnuche ecommerce webụsaịtị gị. Echefukwala ịkwalite nnabata ecommerce na mbupu gị nke ga-abawanye olu ozugbo vidiyo gị malitere ịmalite.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Jiri vidiyo iji bulie ecommerce gị
Esi mee ka ọdịda peeji